१२ ब्रान्ड आर्चटाइप्स: कुन हो तपाईं? | Martech Zone
बुधवार, मई 24, 2017 बुधवार, मई 24, 2017 डेब गैबर
हामी सबै वफादार अनुगमन चाहन्छौं। हामी निरन्तर त्यो जादुई मार्केटिंग योजनाको खोजीमा छौं जसले हामीलाई हाम्रो दर्शकहरूसँग जोड्नेछ र हाम्रो उत्पादनलाई उनीहरूको जीवनको एक अपूरणीय अंश बनाउनेछ। के हामीले प्राय: बुझ्दैनौं कि सम्बन्धहरू सम्बन्धहरू हुन्। यदि तपाईं को हुनुहुन्छ भनेर स्पष्ट हुनुहुन्न भने, कोही पनि तपाईंको चासो लिने छैन। यो आलोचनात्मक छ कि तपाइँ तपाइँको ब्रान्ड को हो बुझ्न, र तपाइँ कसरी तपाइँको ग्राहकहरु संग सम्बन्ध शुरू गर्नुपर्छ।
त्यहाँ १२ आधारभूत पहिचान छन् — वा पुरातन प्रकारएक ब्रान्ड मान्न सक्नुहुन्छ। तल, म तपाईको हकको ठाँउ बुझ्न तपाईलाई पुग्न मद्दत गर्न सबै १२ बिच्छेद गरेको छु।
MAGICIAN ले सपना साकार पार्छ - जादुगर आर्कटाइप दृश्यको बारेमा हो। जादुगर ब्रान्डले तपाईंलाई राम्रो टूथब्रश निर्माण गर्दैन वा तपाईंको घर सफा राख्न मद्दत गर्दैन; तिनीहरूले तपाईंको जीवनको सपना लाई जीवन्त पार्दछन्। उनीहरूले के प्रस्ताव गर्छन् त्यो उत्कृष्ट अनुभव हो अरू कसैले पनि हासिल गर्न सक्दैनन्। एक जादूगर ब्रह्माण्डको मौलिकको साथ यति तालमेल छ कि तिनीहरूले असम्भव सिर्जना गर्न सक्छन्। डिज्नी उत्तम जादूगर हो। डिज्नी मौलिक रूपमा एक मिडिया कम्पनी हो, तर तिनीहरू अरू भन्दा फरक छन्। तिनीहरूले एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रस्ताव। तिनीहरू आफ्नै श्रेणीमा छन् किनकि तिनीहरूको दृष्टि को महानताका साथ। अर्को ब्रान्डको कल्पना गर्नुहोस् जुन एउटा निर्माण गर्न सक्दछ जादुई राज्य वा डिज्नी वर्ल्ड.
SAGE सँधै सत्यको खोजी गर्दैछ - एक ageषि को लागी, बुद्धि सफलताको कुञ्जी हो। अरू सबै कुरा ज्ञानको पछि लाग्ने माध्यमिक हो। एक बाबा ब्रान्ड न्यानो र cuddly महसुस हुन सक्छ। उनीहरूले तपाइँलाई डिज्नी जस्ता शानदार संसारमा मोहित गर्दैनन्। यसको सट्टामा, एक ageषीले उनीहरूको प्रतिभा देखाउँदै तपाईंको आदरको आदेश दिन्छ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय एक साधु हो। तिनीहरू संसारकै सबैभन्दा सम्मानित विश्वविद्यालयहरू हुन्। आठ अमेरिकी राष्ट्रपति, २१ नोबेल पुरस्कार विजेता, र मार्क जुकरबर्ग (प्रकारको) सहितको पूर्व छात्रहरूको सूचीमा घमण्ड गर्नु भनेको हार्वर्डको ब्राण्ड होशियार हुनु हो।
INOOCENT केवल खुसी हुन चाहन्छ - निर्दोष स्वर्गमा सम्बन्धित छ। सबै निर्दोष संसारमा स्वतन्त्र, सद्गुण, र खुशी छन्। एक निर्दोष ब्रान्डले कहिले पनि तपाईंलाई विज्ञापनको साथ दोषी ठहर्‍याउँदैन वा तपाईंलाई विश्वास दिलाउन माथि उकास्नेछ। यसको सट्टामा, एक निर्दोष ब्रान्डले तपाईंलाई केहि अधिक शक्तिशालीको साथ आकर्षण गर्दछ: पुरानो यादवसूची। ओर्भिल रेडेनब्याकर प्रोटोटाइपिकल मासूम आर्चीटाइप हो। उनीहरूले तपाईंलाई बाल्यावस्थाको ट्रीट, पपकोर्न बेच्छन्, र तिनीहरूको मस्कट हजुरबा हुनुहुन्छ जसले रमाईलो गर्न छोडेनन् किनकि धनुषहरू एकमुखी चीज थिए।
OUTLAW क्रान्ति चाहान्छ - आउटला डराउँदैन। आउटला ब्रान्डले यथास्थितिलाई ध्यान दिए बिना तिनीहरूको जीवन नियन्त्रण गर्दछ। जहाँ निर्दोष आर्चीटाइपले तपाइँको त्यो भागलाई छुन्छ जुन किन्डरगार्टनमा खाजाको समय मनपर्दछ, त्यहाँबाट आर्कटाइपले अपील गर्दछ कि तपाइँको अंशले हाई स्कूलको कक्षाहरू कट्यो। एप्पल जस्तो निम्न गुट निर्माण एक बहाना ब्रान्डको अन्तिम लक्ष्य हो। ती पुरानो आइपड विज्ञापनहरू सम्झनुहोस् जहाँ मोनोक्रोम मानिसहरूले आफ्नो जीवनको नृत्यको उत्तम समय बिताउँदछन्? त्यो विज्ञापनले तपाईंलाई भीडमा उभिन वा कन्सर्टमा जानको लागि भनेको छैन। यसले तपाईंलाई आफु हुन भन्छ, जब तपाईं चाहानुहुन्छ नृत्य गर्न, र एप्पल संगै गर्न। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि एप्पल एक पंथ अनुसरण गर्दैन, यो विचार गर्नुहोस्। के मानिसहरूले ग्यालेक्सी एस released रिलिज भएको घण्टासम्म लाइनमा बसेका थिए? होइन, उत्तर हो।
JESTER पल मा बस्छ - जेस्टर भनेको रमाइलोको बारेमा हो। जेस्टर ब्रान्डले बिरामीहरूलाई निको पार्दैन, तर तिनिहरूले तपाईंको दिन राम्रो बनाउँदैछन्। हास्य, मूर्खता, र मूर्खता सबै जेस्टरको टुलकिटमा छन्। एक जेस्टर ब्रान्डको लक्ष्य तपाईंलाई हल्का हृदययुक्त रमाईलोको साथ मुस्कान बनाउनु हो। पुरानो स्पाइस म्यान मेरो सबै समयको मनपर्ने विज्ञापन अभियान र एक जेस्टर आर्चटाइपको उत्तम उदाहरण हो। केही केटाहरूले हाइपर-मर्दाना ब्रान्डि well राम्रो प्रतिक्रिया गर्छन्। अन्य केटाहरूले गर्दैनन्। यी सुपर म्यानली ब्रान्डहरूको मजाक बनाएर, ओल्ड स्पाइसले दुबै पक्षलाई अपील गर्दछ।
LOVER तपाइँको बनाउन चाहान्छ - जोश, खुशी, र कामुकता प्रेमी को कुञ्जी हो। एक प्रेमी ब्रान्डले तपाइँलाई तपाइँको जीवनमा घनिष्ठ क्षणहरूसँग उनीहरूसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। तपाइँ के मनाउन खरीद गर्नुहुन्छ? तपाईं आफ्नो महत्त्वपूर्ण अन्यलाई किन जन्मदिन र वर्षको लागि खरीद गर्नुहुन्छ? संभावनाहरू छन्, तपाईं प्रेमी ब्रान्डबाट खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। Godiva चकलेट विज्ञापनको बारे सोच्नुहोस्। के उनीहरूले तपाईंलाई तपाईंको स्वास्थ्य, तपाईंको वित्तीय, वा तपाईंको भविष्यको बारेमा सोच्दछन्? होइन गोडिवाले तपाईंलाई बहकाउँछ। यसले यसको समृद्धि र क्रीमनेस देखिन्छ। यसले तपाईंलाई जीवनको सबैभन्दा ठूलो भोगमा भाग लिन आमन्त्रित गर्दछ: चकलेट।
EXPLORER खाली ब्रेक गर्न चाहन्छ - स्वतन्त्रता सबै एक अन्वेषक ख्याल गर्दछ। जहाँ अन्य ब्रान्डहरूले तपाईंलाई घर बनाउन मद्दत गर्न सक्दछन्, अन्वेषक ब्रान्डहरूले तपाईंलाई बाहिर ल्याउन चाहान्छन्। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यसले यो बुझ्दछ कि धेरै आउटडोर ब्रान्डहरू अन्वेषक आर्चीटाइपको लागि प्राकृतिक फिट हुन्। सुबारु क्लासिक एक्सप्लोरर ब्रान्ड हो। तिनीहरू लक्जरी वा सान्त्वनाको आधारमा तिनीहरूका कारहरू बेच्दैनन्; तिनीहरू सुबारुले प्रदान गर्ने स्वतन्त्रतामा जोड दिन्छन्। समस्या छैन। सुबारूले तपाइँ जहाँ तपाईं जानुहुन्छ निर्णय गर्न अनुमति दिँदछ, परिस्थितिले कुनै फरक पार्दैन। तपाईं स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
RULER निरपेक्ष शक्ति चाहान्छ - विलासिता र बहिष्कृतता शासकको बारेमा के हुन्छ। एक शासक ब्रान्ड एक गेटकीपर हो। यदि ग्राहक तिनीहरूबाट खरीद गर्दछ भने, उनी कुलीन वर्गमा पर्छन्। एक शासक ब्रान्डको लागि उच्च-गुणवत्ता र महँगो रूपमा ठानेको महत्वपूर्ण छ। गहना र उच्च-अन्त सवारीहरू शासक आर्कटाइपको लागि प्राकृतिक फिट हुन्। के तपाईं यसको क्र्यास परीक्षण रेटिंगको कारण मर्सिडीज बेन्ज किन्नुहुन्छ? यसको ग्यास माइलेजको बारेमा के छ? यो तातो सीटहरु? होइन। तपाईं मर्सिडीज बेन्ज किन्नुहुन्छ किनकि तपाईं किन्न सक्नुहुन्छ, र प्रायः अन्य व्यक्तिले पनि सक्नुहुन्न। जब तपाई आफ्नो कार पार्क गर्नुहुन्छ, व्यक्तिले तपाईको स्थिति बुझ्दछन् तपाईलाई कुनै शब्द नगरीकन। त्यो शान्तसँग बुझिएको मान भनेको एक शासक ब्रान्डले बेच्ने कुरा हो।
CAREGIVER तपाइँको पोषण गर्न चाहन्छ - हेरचाहकर्ता दयालु छ। तिनीहरू तपाइँ र तपाइँ मन परेका मानिसहरूका लागि हुन चाहन्छन्। हेरचाह गर्ने ब्राण्डहरू सबै गर्मी र भरोसा को बारे मा हो। तपाईं तिनीहरूमा निर्भर गर्न सक्नुहुन्छ जब यो तपाईंको बच्चाहरूको लागि आउँदछ। यो एक दुर्लभ ब्रावा विज्ञापन हेर्न को लागी दुर्लभ छ कि उनीहरूको प्रतिस्पर्धा मा एक शट लिन्छ। ती द्वन्द्वको विपरीत हो। जॉनसन र जोसनको ट्यागलाइन लाइन हो Johnson & Johnson: एक पारिवारिक कम्पनी। तपाईं त्यो भन्दा बढी परिवार प्रति प्रतिबद्ध हुन सक्दैन। एक जॉनसन र जॉनसन विज्ञापन सँधै ध्यान केन्द्रित गर्दछ कसरी तिनीहरूको उत्पादनहरूले तपाईंलाई तपाईंको बच्चाहरूको देखभाल गर्न मद्दत गर्दछ। कसरी उनीहरूको उत्पादनले परिवारहरू बनाउँछ। यो हेरचाहकर्ता आर्चटाइपको लागि रोटी र बटर हो।
हीरो आफूलाई प्रमाणित गर्न चाहन्छ - नायकले सर्वश्रेष्ठ भएर पनि संसारलाई राम्रो बनाउँछ। एक नायक ब्रान्ड तपाईं हेरचाह संग चिन्तित छैन; उनीहरू तपाईंलाई चुनौती दिन मा रुचि छन्। यदि तपाइँ यस अवसरमा बढ्न चाहानुहुन्छ भने तपाईलाई नायकको सहयोग चाहिन्छ। अमेरिकी सेना एक नायक आर्किटाइपको अन्तिम उदाहरण हो। भर्ती विज्ञापनहरूबारे विचार जुन तपाईंले हेलिकप्टरबाट सैनिकहरू उफ्रँदै गरेको, प्रशिक्षण कोर्सबाट दौडँदै, र देशको सुरक्षा गरेको देख्नुभयो। केहि पनि तपाईंको दिन प्रति दिन जस्तो देखिन्छ कि? होईन। यो मान्नु हुँदैन। यो तपाईं बाध्य गर्न डिजाइन गरिएको छ कललाई उत्तर दिनुहोस् र एक हीरो ब्रान्डको साथ सम्मिलित भएर अवसरमा उठ्नुहोस्: अमेरिकी सेना।
नियमित GUY / GIRL सम्बन्धित गर्न चाहन्छ - कुनै ग्लिट्ज वा ग्लैमर छैन, एउटा भरपर्दो उत्पादन जुन काम पूरा गर्दछ। त्यो केटिको केटा / केटी ब्रान्डले बेचेको छ। आर्चीटाइपले यस्तो चीज प्रदान गरिरहेको छ कि त्यसले सबैलाई अपील गर्न सक्छ। यो तान्न सबैभन्दा कठिन आर्किटाइप हो किनभने तपाईंसँग एउटा उत्पादन छ जुन डेमोग्राफिक्समा अपील गर्दछ। सबैले कफी पिउँछन्। प्रत्येक व्यक्ति हैन, तर प्रत्येक प्रमुख जनसांख्यिकीय शिशुहरूको सम्भावित अपवाद सहित। यही कारणले फोल्जरलाई उत्कृष्ट प्रत्येक केटा / केटी ब्रान्ड बनाउँछ। Folgers हिप भीड को लागी बजार छैन। तिनीहरू आफ्नो उच्च गुणवत्ता, सबै जैविक कफी को बारे मा गर्व छैन। तिनीहरूले यो सरल राख्छन्: "उठ्नुको उत्तम अंश तपाईको कपमा फोलगरहरू हो।" सबै उठ्छन्। सबैले फोलगरहरू पिउँछन्।
CREATOR पूर्णता चाहान्छ - एक सिर्जनाकर्ता उत्पादन लागत वा मापनमा चीजहरू बनाउने लागतको बारेमा चिन्तित छैन। तिनीहरू एक चीजको बारेमा ख्याल राख्छन्: उत्तम उत्पादनको निर्माण। जबकि जादुगरले पनि दर्शन र कल्पनालाई जोड दिए, सिर्जनाकर्ताहरू फरक छन् कि तिनीहरू संसारको जादू अनलक र असम्भव सिर्जना गर्दैन। तिनीहरूले उत्तम उत्पादन सिर्जना गर्छन्। लेगो एक सिर्जनाकर्ता archetype को एक महान उदाहरण हो। तिनीहरूको एउटा विज्ञापनमा, लेगोले आश्चर्यजनक विवरणका साथ संसारका सबैभन्दा प्रसिद्ध ठाउँहरू सिर्जना गर्‍यो। तिनीहरूले नयाँ साइटहरू निर्माण गरेनन्, र तिनीहरूले केही नयाँ प्रविधि सिर्जना गरेनन् जुन तपाईंको घरमा साइटहरू राखियो। लेगोले सम्भव सरल टेक्नोलोजी प्रयोग गर्‍यो: ब्लक। तिनीहरूले यो सरलता लिए र यसलाई यो सबै भन्दा पूर्णतावादी चरम मा धक्का। यो भनेको एक सिर्जनाकर्ता हुनुको बारेमा हो।
त्यसो भए तपाईको ब्रान्ड के हो?
दशकौं बर्षको अनुभवबाट, म तपाईलाई भन्न सक्छु कि हरेक कम्पनीले टेबुलमा आउँछन् भन्ने ठान्दै तिनीहरू प्रत्येक केटा / केटी हुन्, तर 99 cases% मामिलामा, तिनीहरू त्यस्तो छैनन्। तपाईको ब्रान्डलाई के विशेष बनाउँदछ र कसरी तपाइँको ग्राहकहरु लाई तपाइँको उत्पादनहरु संग राम्रो संग जोड्न को लागी सजिलो छैन, तर यो तपाईले गर्नु पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईले के आर्चीटाइप प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ।
टैग: पुरातन प्रकारब्रान्डब्रान्ड पहिचानहेरचाहनिर्माताडिज्नीडिज्नी विश्वअन्वेषकनायकनिर्दोषजेस्टरप्रेमीजादू साम्राज्यजादूगरआउटसोलनियमितशासकबाबा
डेब गेबर यसका लेखक हुन् ब्रान्डि Sex भनेको यौन हो: तपाइँका ग्राहकहरूलाई राख्नुहोस् र केही पनि छोड्नुहोस्। उनी सोल मार्केटिंगका संस्थापक हुन् जसले डेल, माइक्रोसफ्ट, र एनबीसी युनिभर्सल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घरेलू नामहरूदेखि Allrecines, Chezburger, HomeAway र रिटेलमनेट, र दर्जनौं प्रारम्भिक चरण टेक र डिजिटल जस्ता संस्थाहरूको लागि ब्रान्ड रणनीति संलग्नताको नेतृत्व गर्छिन्। मिडिया शीर्षक